Maamulka Gobolka Banaadir oo u Digay Hay’ado la sheegay in ay Faafinayaan Madhabka Shiicada – Radio Daljir
Maajo 8, 2015 3:49 b 0
Jimco May 08, 2015 (Daljir) — Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Jen. Xasan Maxamed Xuseen (Muun-gaab) maanta shaaca ka qaaday inay soo gaareen cabashooyin ku saabsan inay jiraan hay’ado iyo NGO-yo Muqdisho ku faafinaya madhabta Shiicada ee diinta Islaamka, isagoo ku goodiyay in hay’addii lagu helo inay faraha kula jirto arrintaan ay dalka ka eryi doonaan.
Muun-gaab ayaa sheegay inay socdaan Baaritaanno Arrintan la xiriira, ayna la Xisaabtami doonaan cid walba oo ku lug yeelata arritaan, isagoo sheegay inaanay ogoleyn in dalka lagu faafiyo Shiicada, inkastoo uusan xusin hay’adaha ku lugta leh arrintan.
“Waxaa jira cabashooyin ka imaanaya shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool, gaar ahaan culumada, abwaannada, aqoon-yahanka iyo dhaqanka, taasoo ah in Muqdisho waxaa ka socda mashruuc dadka madhabta Shiicada lagu barayo, waxaana howshan wada NGO-yo ku gabanaya inay arrimo gar-gaar, arrintaasna walwal ayay na gelisay,” ayuu yiri Xasan Muun-gaab.
Sidoo kale, Duqa Muqdisho ayaa xusay in shacabka Soomaaliyeed ay gabi ahaantood yihiin SUNNI, aysana aqbalayn in bulshadeena la baro Shiico iyo wixii la mid ah. Wuxuuna intaas ku daray in cid walba oo lagu helo inay ku lug leedahay arrintan tallaabo laga qaadi doono.
\_”Hay’adaha amniga gobolka, guddoomiyeyaasha degmooyinka Muqdisho, dhallinyarada iyo haweenka waxaa la farayaa inay ka hor-tagaan arrintan ayna soona qabtaan NGO-gii isagoo faraha kula jira la arko, waayo innagu Xamar ayaa xukunnaa in Shiico dadkeenna la barana ma aqbalayno. waayo waxaan awalba qaati ka taaganayn argagixisada ah, ma ogolaanayno in la keeno Shiico,” ayuu hadalkiisa ku daray Muun-gaab.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hadalkiisa ku raaciyay in arrintan ay tahay mid lagu doonayo in colaado kale Dalkeenna la geliyo, kuwaasoo salka ku haysa muran ku saabsan madaahibta diinta Islaamka, waayo dhibaato ka dhalatay Shiico iyo Sunni ayaa ka ka taagan hadda Dunita Islaamka.
“NGO-gii lagu helo inuu Shiico Muqdisho ku faafinayo xitaa 1% sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan albaabbada ugu laabanaynaa, dalkana waa laga eryayaa,” ayuu Muun-gaab mar kale ku goodiyay, isagoo intaas raaciyay in baaritaannada ay wadaan marka ay soo dhamaadaan ay kasoo saari doonaan arrintan warbixin rasmi ah.
Dhanka kale, dowladda Somalia iyo maamullada gobollada dalka ayuu iyagana ugu baaqay inay arrintan fiiro gaar ah u lahaadaan, isagoo si gaar ah u sheegay in dowladda Somalia ay mas\_’uuliyadi ka saran tahay wax ka qabashada arrintan.
Ugu dambeyn, wuxuu duqa Muqdisho ku cel-celiyay inaysan aqbali doonin in Somalia la keeno Shiico, waxaana hadalka Xasan Muun-gaab uu kusoo beegmayaa iyadoo ay jireen dhawaanahan warar ku saabsan in dadka Soomaaliyeed la baro madhabta Shiicada, balse illaa hadda ma jirto cid sheegaysa inay tahay Shiico.
Madaxweyne Gaas oo la kulmay Madax ka tirsan Wasaaradda Arimaha dibadda Talyaaniga